Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. प्रेरक प्रसंग – Janata Live
फोर्ब्सको धनीहरुको सुचिमा माइक्रोसफ्टका पूर्व सीईओ तथा चियरम्यान बिल गेट्सको नाम फेरी पहिलोमा आएको छ। ७९.२ अरब डलरको साथ दुनिया कै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् बिल गेट्स्। पछिल्लो २१ वर्षमा उनी १६ पटकसम्म फोर्ब्सको सुचिमा अग्रपङ्तिमै छन्। यो सुचिमा उनी पश्चात दोस्रोमा मेक्सिकोका कालरेस स्लिम हेलु र तेस्रोमा अमेरिकाका वारेन बफे छन्। ५९ बर्षमा पाइला टेकिसकेका गेट्सको पुरा नाम भने विलियम हेनरी बिल गेट्स तेस्रो (William Henry “Bill” Gates III) हो। गेट्सले आफ्नो जीवनकामा केहि सिद्धान्तहरु बनाए र त्यहि सिद्धान्तकै अनुसरण गर्दै विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न सफल पनि भए। तल यस्ता ११ सिद्धान्त तथा आदर्शहरु छन् जुन बिल...
गौतम बुद्धको महापरिनिर्वाण पछि शोकमग्न भिक्षुहरुसँग सुभद्र नामक एक भिक्षुले भने – “भिक्षुहरु, शोक नगर, रोदन नगर ! हामीहरुले महाश्रमणबाट छुटकारा पाएका छौं । उनी हुँदा जहिले पनि ‘यो गर, यो नगर’ भन्थे तर, अब हामी जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने भएका र्छौं ।” सुभद्र भिक्षुको यो वचन सुनेर सबै भिक्षुहरु छक्क परे । बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि सद्धर्मको नाश हुने डर भयो । भिक्षु सङ्घ र समाजका लागि बुद्धले दिएको शिक्षा लोप हुने डरले विभिन्न समयमा सङ्घमार्फत बुद्ध वचनलाई एकै ठाउँमा सङ्ग्रह गर्ने काम भयो । यो सङ्ग्रह नै त्रिपिटक हो । बुद्धले बोधगयामा ज्ञान प्राप्त गरेपछि ४५ वर्षसम्म नेपाल,...
कुरा आदिम समयको हो । साधु तुकाराम आफ्नो आश्रममा बसिरहेका थिए । उनका एकजना रिसाहा चेला साधुको नजिक आए र भने, ‘गुरुजी, तपाई कसरी आफ्नो व्यवहार यति हार्दिकतापूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ ? न तपाईं कोहीसँग रिसाउनु हुन्छ न अरुको बारेमा कुरा काटेर समय बिताउनुहुन्छ ? कृपया तपाईंको यस्तो असल व्यवहारको रहस्य बताउनुहोस् ।’ साधुले भने, ‘मलाई मेरो आफ्नै रहस्य त थाहा छैन, तर म तिम्रो रहस्य भने जान्दछु ।’ ‘मेरो रहस्य ! त्यो के हो गुरुजी ?’ शिष्यले आश्चर्य मान्दै सोधे । ‘तिमी आउँदो एकहप्ता भित्र मर्दैछौ,’ साधु तुकाराम दुःखी हुँदै बोले । अरु कसैले भनेको भए त शिष्यले यो चेतावनीलाई...
काठमाडौँ – महात्मा बुद्धको समयको कुरा हो । मृत्युपछि आत्मालाई स्वर्गमा प्रवेश गराउनको लागि पण्डित कुनै विशेष कर्मकाण्ड गर्दथे । यसको विपरित पण्डितले जमेर दान-दक्षिणा लैजान्थे । मानिसहरु आफ्नो मृत परिवारजनको स्वर्गमा स्थान दिलाउनको लागि पण्डितको हरेक कुरा मान्दथे । एकदिन गाउँमा एक बृद्ध पुरुषको मृत्यु भयो । उनका छोराले यो सोचे की, पिताजीको आत्मालाई स्वर्गमा स्थान दिलाउने । उनले महात्मा बुद्धको मद्यत लिए । ति युवक बुद्धकोमा गए र भने— कृपया कुनै यस्तो उपाय बताइदिनुहोस जसले गर्दा मेरो पिताजीको आत्मालाई स्वर्गमा स्थान मिल्न सकोस् । बुद्धले भने— तिमी दुइवटा माटोको भाँडो ल्याउ, एउटामा पत्थर र अर्कोमा घीउ भर ।...
जिन्दगीमा मौका दिनेवालालाई धोका र धोका दिनेवालालाई मौका कहिले पनि नदिनु खोज्नु नै छ भने तपाइँको चिन्ता गर्ने वालालाई खोज्नुस् किनभने तपाइँलाई प्रयोग गर्नेवालाले तपाइँलाई खोजी नै रहेको हुनेछन् । केही मान्छेहरु चप्पलको जस्तै हुन्छन् साथ पनि चल्दछन् र पछाडिबाट हिलो पनि उठाउने गर्दछन् । यदि दुनियाले तपाइँको विरोध गर्छ भने नडराउनुहोस् किनभने जुन रुखमा फल लाग्छ नि दुनियाँ त्यही रुखलाई ढुङ्गा हान्ने गर्दछन् । जिन्दगीको एउटा नियम छ जहाँ तपाइँको कदर हुँदैन त्यहाँ नजानु जुन खाने कुरा पच्दैन त्यो नखानु सत्य कुरा बोल्दा पनि जसले मान्दैन नि त्यसलाई फकाउन नखोज्नु । केही घट्नाहरु तबसम्म बुझिदैन जबसम्म त्यो घटना हामीमा...
हामी जहाँ जन्मियौं, त्यो गौतम बुद्धको जन्मभूमी पनि हो भनेर गर्व गर्छौं । अहिले पनि हामी ‘गौतम बुद्ध जन्मिएको देश’ भनेर सगर्व नेपालको चिनारी दिन्छौ । यद्यपी गौतम बुद्ध किन विश्वमा कहलिए ? उनले चराचर जगतका लागि के गरे ? उनीबाट मानव जीवनका के कुरा सिक्न सकिन्छ ? उनी ईसा पूर्व ५६३ पहिले कपिलवस्तुमा जन्मिएका थिए, राजा शुद्धोधन र मायादेवीको कोखबाट । अतः यहाँ गौतम बुद्धको केही अनमोल वचन प्रस्तुत गरिएको छ, जसले तपाईंको सोंच बदल्न सक्छ । – आज हामी जे छौ, त्यो आजसम्म हामीले के सोच्यौ त्यसैको परिणाम हो । यदि कुनै व्यक्ति खराब सोचले बोल्छ वा काम...
काठमाडौं – १३ औं शताव्दीका प्रख्यात कवि मौलाना जलालुद्दिन रुमी । उनको नाम अहिले पनि अविस्मरणीय छ । उनका कविताहरु विश्वका धेरै भाषामा अनुवादित छन् । दार्शनिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि महत्वपुर्ण मानिने रुमीको जन्म ३० सेप्टेम्वर सन् १२०७ मा भएको थियो । रुमीको जन्म अहिलेको अफगानिस्तानमा भएको थियो । पछि उनको परिवार हालको टर्कीमा बसोबास गर्न थाल्यो । आफूलाई अध्यात्म विज्ञानको ज्ञाताका रुपमा परिचित रुमीको मृत्यु डिसेम्बर १८ सन् १२७३ मा टर्कीमा भएको थियो । तीनै महान व्यक्ती रुमीका केही भनाईहरु यहाँ उल्लेख गरेका छौं । जुन तपाईंको जिवनमा पनि उपयोगी बन्न सक्छन् । – तिमीले जिवनमा भोगेका या...
जीवनलाई सार्थक बनाउन सहयोग गर्ने बुद्धका यी ८ वाणी
काठमाडौं– मानव जीवनलाई पूर्ण, सार्थक र सरल बनाउनका लागि गौतम बुद्धका वाणी निकै सहयोगी मानिन्छन् । सयौं वर्ष पहिला बुद्धले भनेको वाणीहरु ऋझैं पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । यस्ता केही भनाइमध्ये तलका भनाइलाई व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने मात्रै पनि हाम्रो जीवनमा बहार आउने कुरामा कुनै शंका छैन् । १. जीवनको अन्त्यमा ३ वटा कुरामात्रै महत्वपूर्ण हुन्छन् । पहिलो, तपाईंले अरुलाई कति माया गर्नु भयो भन्ने हो । दोस्रो, तपाईंले आफ्नो जीवन कति सरल र भद्र तरिकाले बिताउनु भयो भन्ने हो । तेस्रो, आफूसँग सरोकार नराख्ने कुराबाट कति मुक्त हुनुभयो भन्ने हो । २. खराव वा नकरात्मक मानिसबाट टाढा रहनु...
बाजिराव पेसवा मराठा सेनाका प्रधानसेनापति थिए । एकपटक कुनै युद्धमा विजयी भएर उनी आफ्नो सेनासहित राजधानी फर्किरहेका थिए । बाटामा उनको सेना थाकेर अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । उनीहरू एक स्थानमा रोकिए । उनीहरूसित खानेकुरा पर्याप्त थिएन । बाजिरावले आफ्ना निकट सहयोगी सैन्य अधिकारीलाई बोलाएर भने– तिमी केही सिपाही लिएर नजिकको कुनै खेतमा जाऊ र त्यहाँ खान मिल्ने जुन अन्न भेट्छौ, त्यो काटेर यहाँ ल्याऊ । बाजिरावका सहयोगी केही सैनिक साथमा लिएर नजिकैको गाउँमा पुगे । त्यहाँको खेतमा आलु खन्ने समय भएको थियो । उनी त्यही खेततिर अघि बढे । उनलाई देखेर खेती निरीक्षण गर्न आएका सरकारी अधिकारी सम्झेर...